Buy7in 1မျက်နှာသစ်စက် - မျက်နှာ သစ်တာ (7,500 Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
7 in 1မျက်နှာသစ်စက် - မျက်နှာ သစ်တာ
💆7in 1မျက်နှာသစ်စက်
😊- မျက်နှာ သစ်တာကို တော်တော် များများက အသေးအမွှား ကိစ္စတစ်ခု အနေနဲ့သာ သဘောထား ကြပါတယ်။ မျက်နှာ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း စတဲ့ အရေပြား ပြဿနာတွေ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
😊 - ဒါ တွေကို အလွယ်ကူ ဆုံးဖြေရှင်းပေး မဲ့7in 1 Beauty Care Massager (မျက်နှာသစ်စက်) လေး လာပါပြီ ။
😍 - မျက်နှာပေါ်ကမမြင်နိုင်တဲ့ ဖုန်၊အဆီ၊ဖုန်မှုန့် နဲ့ အညစ်အကြေးများကိုအချိန်တိုတွင် လက်​ဖြင်​ဖြင့်​သန့်​စင်​တာထက်​ ပိုမိုသန့်စင်အောင် ဆေးကြော သန့်စင်နိုင်တဲ့ 7in 1 မျက်နှာသစ်စက်​က​လေး ပါ။
🙂 - Beauty care massager လေး​ကဆိုင်​တွင်​သွား​ရောက်​​ အချိန်မ​ပေးနိုင်​တဲ့သူများအတွက်​ အချိန်​ကုန်​​ငွေကုန်​သက်​သာ​စေမှာပါ။Beauty care massager စက်လေး ကို AA ဓာတ်ခဲအသေးလေးနှစ်လုံးထည့်​ရမှာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုပြီးပါက ဓါတ်ခဲလေး ကို ပြန်ထုတ်ထားရင်ကြာရှည်ပိုခံပါတယ်။
❤️- 1. နူးညံ့တဲ့ Soft Brush ဟာဆိုရင်မျက်နှာပြင်အနှံ့ ဖွဖွလေး ပွတ်တိုက်ကာ မျက်​နှာကို​သန့်​စင်​ရာ၌အသုံးပြုပေး ရမှာဖြစ်ပြီးနှစ်သက်ရာ cleansing cream တို့ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့brushလေးဖြစ်ပါတယ်။
❤️ - 2. မိတ်ကပ် လိမ်းရာတွင်အသုံးပြုပေးရမဲ့ makeup sponge လေးကတော့ မိတ်ကပ်ကို လက်ဖြင့်လိမ်းတာထက် ပိုမိုညက်ညော စေကာ သဘာဝကျကျ လှပစေပါတယ်။မိတ်ကပ်ကိုလက်နဲ့ လိမ်းစရာမလိုပဲ
ဖော့လေးပေါ် မိတ်ကပ်ရည် အနည်း ငယ်ထည့် ပြီး စက်လေးဖြင့် အသာအယာ ပင့်သက် ပေးလိုက်ရုံဖြင့် ညီညာ ညက်ညော စေပြီး
မိတ်ကပ်မညီတာ ကွက်တာတို့ ကို လည်းကင်းဝေးစေ လို့ လှသည် ထက်ပိုမိုလှစေ ပါတယ်။
❤️ - 3. Roller Messager လေး ကတော့ မျက်နှာပြင်ကို သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်း စေရန် နှင့် အရေးအကြောင်း ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန် massage လုပ်ပေး နိုင် မှာပါ။
❤️ - 4. Crude Polish​ လေးက​တော့ ဂျိုင်း၊ဒူးခေါင်း၊ဖနောက် တံတောင်ဆစ် လိုနေရာလေး တွေ ကိုနူးညံ့ဖြူဖွေး စေဖို့အတွက် အသုံးပြုပေးရ​ပေးရမှာပါ။
❤️ - 5. Latex Soft Sponge လေး ကတော့ မျက်လုံး နားတ၀ိုက်သွေး လည်ပတ်မှုကောင်းစေရန်နှင့်မျက်လုံးအောက်အရေးကြောင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေး တဲ့ပစ္စည်း လေး ပါ။
👉 အသုံးပြုချင်သည့် ပစ္စည်းလေး ကိုစက်လေးရဲ့ ထိပ်မှာတပ်ဆင်ကာ
AA ဓါတ်ခဲ (2) လုံး ထည့်ပြီး လိုသလို အနှေးအမြန်လေးနဲ့ခလုတ်လေးကို နှိပ်ကာအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
😉 -7in 1 Beauty Care Massager (မျက်နှာသစ်စက်) လေး ကိုအသုံးပြုခြင်း ဖြင့် မျက်နှာလေးကို တင်းရင်းပြီး အညောင်းအညာပြေစေပြီး အရွယ်တင်နုပျိုလာ စေ ပါတယ်နော် ..
ပစည်း အသင့်ရှိ order cb
အမည်:7 in 1မျက်နှာသစ်စက် - မျက်နှာ သစ်တာ